အဝါရောင်ကိတ်မုန့် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အတူကြက်သားခုတ် suey စာရွက်
တစ် ဦး ကဂန္ အဝါရောင်ကိတ်မုန့် စာရွက်လူတိုင်းကသူတို့လက်နက်တိုက်ရှိသင့်တစ်ခုခုပါပဲ။ ဤသည်ဟောင်းခေတ်ကိတ်မုန့်မွေးနေ့နှင့်နေ့စဉ်အခမ်းအနားများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနူးညံ့သောထောပတ်ကိတ်မုန့်အဘို့အထောပတ်, ကြက်ဥနှင့်ထောပတ်ကြွယ်ဝသောရောစပ်နှင့်အတူလုပ်!
သင်ဤအိမ်လုပ်အဝါရောင်ကိတ်မုန့်တွင်အေးခဲအောင်လုပ်နိုင်သည် ချောကလက် Buttercream Frosting , Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်း သို့မဟုတ်ပင် သံပုရာ Buttercream !
ဒီအဝါရောင်ကိတ်မုန့်အထူးသဖြင့်ကြက်ဥအနှစ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီးဒီစိုစွတ်တဲ့အဝါရောင်ကိတ်မုန့်ကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ဖို့ထောပတ်ကိုသုံးတယ်။ သငျသညျလက်ပေါ်မှာထောပတ်မရှိသည်မဟုတ်လျှင်, ငါ့အကိုအသုံးပြုရန်အခမဲ့ခံစားရသည် လွယ်ကူသောထောပတ်အစားထိုး ။
မီးဖို Preheat နှင့်အမဲဆီနှင့် သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်အိုးတွေကိုသားရေစက္ကူနဲ့တန်းစီပါ ။ ဒါကဒယ်အိုးထဲကကိတ်မုန့်ကိုဖယ်ရှားဖို့လွယ်ကူစေသည်။
ထောပတ်၊ သကြား၊ ဆီနှင့် vanilla တို့ကိုအတူတကွမွှေနှောက်ပါ။ ကြက်ဥများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ထည့်ပါ။
ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရော်ဘာ spatula ဖြင့်ခေါက်ပြီးအဆီနှင့်ပြောင်းပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်ခေါက်ကိတ်မုန့်အလင်းနှင့် fluffy စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
အေးခဲစေရန်, စာရွက်လမ်းညွှန်များအရမုန့်ဖုတ်။ အအေးခံပါ။ ကိတ်မုန့်လုံးဝအေးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်အလွှာတစ်ခုစီကိုပလပ်စတစ်ဖြင့်ထုပ်ပြီး၊ အလွှာတစ်ခုစီကိုလူမီနီယံသတ္တုပါးဖြင့်ထုပ်ပြီး၊ အလွှာတစ်ခုစီကိုရေခဲသေတ္တာအိတ်ကြီးတစ်ခုထဲတွင်ထည့်ပါ။ သုံးလအထိအေးခဲပါ။
အသုံးပြုရန်အသင့်ဖြစ်သည့်အခါရေခဲသေတ္တာမှဖယ်ထုတ်ပြီးပတ်ပတ်လည်တွင်မိနစ် ၃၀ မှ ၆၀ မိနစ်အရည်ပျော်အောင်လုပ်ပါ။
Hummingbird ကိတ်မုန့် - ဂန္ထဝင်အလွှာကိတ်မုန့်၏အရသာကောင်းသောစာရွက်ကိတ်မုန့်ဗားရှင်း!
ချောကလက် Mayonnaise ကိတ်မုန့် - decadent & အရသာကိတ်မုန့်
တက္ကဆက်ပြည်နယ်စာရွက်ကိတ်မုန့် - ဂန္တောင်ပိုင်းကိတ်မုန့်
ဝိုင်နီချောကလက်ကိတ်မုန့် - စိုစွတ်သောချောကလက်ကိတ်မုန့်နှင့်ဝိုင်နီ။
Tres ကိတ်မုန့် leches - အရသာရှိတဲ့ချိုမြိန်ကိတ်မုန့်
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၃၅ မိနစ်များ အချိန်အေး၁ နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်၁ နာရီ ငါးဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၂ လူ စာရေးသူရေဗက္ကာ ဂန္ထဝင် Yellow Cake စာရွက်သည်လူတိုင်းမိမိတို့၏လက်နက်တိုက်တွင်ရှိသင့်သည်။ ဒီအဟောင်းကိုကိတ်မုန့်နူးညံ့သောအဘို့ကြွယ်ဝသောထောပတ်, ကြက်ဥနှင့်ထောပတ်ရောစပ်နှင့်အတူလုပ်နှင့်မွေးနေ့နှင့်နေ့စဉ်အခမ်းအနားများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောထောပတ်ကိတ်မုန့်နှင့်အတူလုပ်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢2 ¾ ခွက် မုန့်ညက်မုန့်ညက်
▢1 ½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါမှုန့်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ကိုရှာဆား
▢1 ½ ခွက် သကြားဓာတ်
▢⅓ ခွက် ဟင်းရွက်ဆီ
▢⅔ ခွက် unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်
▢နှစ် ကြီးမားသောကြက်ဥအနှစ် အခန်းအပူချိန်
▢1 ½ ခွက် နို့ အခန်းအပူချိန်
သင်၏မီးဖိုကို ၃၂၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိအပူပေးပြီးချက်ပြုတ်သောအမှုန့်များပါသော ၈ လက်မအရွယ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိတ်မုန့်နှစ်လုံးကိုဖျန်းပြီးပုလင်းများကိုပုဝါစက္ကူဖြင့် ကပ်၍ ဖယ်ထားပါ။
အလယ်အလတ်ပန်းကန်လုံးတွင်မုန့်ညက်၊ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ၊ ဘေးဖယ်ထားပါ။
သကြား၊ ဆီ၊ ထောပတ်နှင့် vanilla တို့ကိုအတူတကွမုန့်ဖုတ်ပါ။
ပေါင်းပြီးသည်အထိတစ် ဦး ချင်းစီအပိုဆောင်းပြီးနောက်ရိုက်နှက်တစ်ချိန်ကကြက်ဥနှင့်ကြက်ဥအနှစ်ထည့်ပါ။
ရော်ဘာလိမ္မော်ရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲပြီးအဆီပါသောအပိုင်းကို ၂ ပိုင်းခွဲပါ။ ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်စတင်ပြီးအဆုံးသတ်ပါ။ အလွန်သေးငယ်သောဖုများကျန်ရှိသည်အထိညင်ညင်သာသာခေါက်။ ဤအဆင့်အတွက်လျှပ်စစ်ရောနှောခြင်းကိုမသုံးပါနှင့်။
Battery ကိုပြင်ဆင်ထားသောကိတ်မုန့်နှစ်ခုကြားတွင်ညီမျှပြီး ၃ မိနစ်မှ ၃၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ဖုတ်ရမည်။ သွားပြီးရင်သွားတိုက်တံကစင်ကနေသန့်ရှင်းလာလိမ့်မယ်။
ကိတ်မုန့်အိုးများကိုဝါယာကြိုးသုတ်လိပ်စာတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပါ။ နှာမပိတ်မီ (၁ နာရီခန့်) အအေးမခံမီကိတ်မုန့်များကိုဒယ်အိုးထဲတွင် ၁၀ မိနစ်အအေးခံပါ။ ပြီးတာနဲ့အအေး, နှင်းခဲနှင့်လိုချင်သောအတိုင်းကိတ်မုန့်စုဝေးစေ။
အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များသည်နှင်းခဲများမပါ ၀ င်ပါ။
သော့ချက်စာလုံးအဝါရောင်ကိတ်မုန့်, ​​အဝါရောင်ကိတ်မုန့်စာရွက် သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ထံမှ Adapted ရော့ခ်ချက်ပြုတ်နည်းများ ။